Dowladda oo berito qabaneeysa shir jaraa’id ka dib mucaaradka oo kalsoonidii kala noqday | Somaliska
Xukuumadda uu hogaamiye ra’iisal wasaare Stefen Lövfen ayaa shaacisay maanta gelinkii dambe in berito ay qabaneeyso kulan saxaafadeed. Arrintan ayaa timid ka dib markii maanta xisbiyada mucaaradka ee xulufadda qabteen shir jaraa’id kuna sheegeen in ay kalsoonidii kala noqdeen saddex wasiir oo ka tirsan dowladda Lövfen.
“Haddii aannu nahay xisbiyada xulufadda waxaannu codsaneeynay in wasiiraddu ay hor yimaadaan baarlamaanka si ay uga jawaabaan bixiyaan sidii dawladdu u maareysey fadeexaddii waaxda gaadiidka dalka, mana eeynaan helin jawaab,ayaan gi’aansanay anaggoo wada jir ah in codka kalsoonida loo qaado saddex-daas wasiir ee xukuummadda ka mid ah” ayey tiri Anna Kinberg Batra, oo hogaamiyaha xisbiga Modaraat-ka ee dalkaan Iswiidhan. Sidaasi si lamid ah ayaa waxaa afka u furtay hogaamiyaha xisbiga xagjirka ah ee SD Jimmie Åkesson oo sheegay in saddexaasi wasiirka xilka ka dagaan.
Ra’iisal wasaare Lövfen ayaa maanta iskugu yeeray wasiiradiisa kuwaas oo ku kulmayey xarrunta Rosenbad ee laga arrimiyo dalka, wasiiradda ka qeyb galay kulanka ayaa waxaa ka mid aheyd wasiiradda arrimaha dibadda Margot Wallström iyo qaar kaloo badan mana jirto wax hadal ah oo laga soo saaray kulankooda balse dowladda ayaa shaacisay in berito gelinka hore ay qabaneeyso shir jaraa’id.
Dhanka kale hogaamiyaha xisbiga biddix ee gacan saarka la leh dowladda Jonas Sjöstedt, ayaa sheegay in qoraal dacwad u diray guddiga baarlamanka kaas oo uu aad u dhaliilayo mucaaradka iyo sideey laftooda albaabada ugu fureen fadeexada waaxda gaadidka muddadii ay xilka hayeen oo uu sheegay in qudhooda mas’uul ka yihiin go’aankii lugu gaaray in shirkado shisheeye lugu siiyo qandaraas maareeynta waaxda gaadiidka dalka. Haatan xaalka wasiiradan ayaa u muuqda mid qal qal geliyey xukuumadda Lövfen ee aan awood ku laheeyn baarlamaanka dalka.
Sharciyadda baarlamaanka Iswiidhan
Dalkaan waxaa u yaala sharci ah in 35 xildhibaan ay soo jeedin karaan in codka kalsoonida loo qaado dawladda ama qaar wasiiradeeda ka mid ah, markaa dibna ugu yaraan 175 xildhibaan oo ka mid ah 349 xildhibaan ee uu baarlamaanka ka kooban yahay ay HAA ugu codeeyaan in codkaas kalsoonida la qaado.
Haddii marka baarlamaanka dalku codkiisa ku muujiyo in uusan kalsooni buuxda ku qabin reysal wasaaraha, waxaa qasab noqoneeysa in dawladda oo dhammi iscasisho ama ay ku dhawaaqdaa in doorasho cusub dalka u dareero. Hase ahaatee haddii kalsoonida laga noqdo oo keliya wasiiro ka tirsan xukuumadda waxaa is casilaya oo keliya wasiiradda kalsoonida lagala noqday Ugu dambeyntiina inta la og yahay baarlamaanka dalkaan ayaa codka kalsoonida shan jeer oo qura qaaday.